Kukhanye buso ekhaya: izindlela eziningana ukupheka
Ngo ukugeleza imisebenzi yansuku zonke, asikwazi ngaso sonke isikhathi sinake isimo izinwele zethu. Kuphela uma inkinga kuba sobala kakhulu, siqala ukumukela ezinye izinyathelo zokulungisa. Uma izinwele zakho elahlekile ucwebezela ngendlela ekhangayo, uyazi, into ngeke. Mhlawumbe ukudla okudlayo okungenakho ukulinganisela, usebenzisa imoto akuyona izinwele zakho uhlobo, ngokuvamile yakhetha umbala izinwele, perming , njll Kunoma ikuphi, kufanele kuqala ukuthola imbangela ukulahlekelwa ukukhanya, bese ukuqala ukubhekana naso. kukhanye buso ekhaya - ithuluzi enkulu, futhi ungakwazi nakalula ke bebodwa.
A abantu ikhambi izinwele akhanye: zokupheka best
Ayikho siqondiso ezazingathandi bathole ukusetshenziswa imithi yendabuko. Lokho ukunakekelwa izinwele wadala isamba esikhulu zokupheka ezinhle, kuhlanganise ukwenza akhanye. Indlela elula ukunikeza izinwele ukunakekelwa - wente imaskhi. Nazi ezinye izindlela eziphumelelayo.
Kukhanye buso ekhaya: kadokotela 1
Ukuze ekuwulungiseleleni uzodinga iqanda elilodwa rum noma brandy e inani wezipuni ezine. Hlanganisa kokubili imikhiqizo kuze iyunifomu. Beka imaski siphelile on izinwele zakho, bese ubamba imizuzu amabili. Ingabe ngempumelelo, uma ungase uqale ungaboni basuse imaskhi ngamanzi afudumele ke kubanda.
Kukhanye buso ekhaya: 2 iresiphi
Thatha ezimbili wezipuni zamafutha ocolisekileyo, iqanda ithisipuni elilodwa uviniga buhlanjululwe futhi glycerol. Zonke uhlanganise kahle abese isicelo izinwele ahlanzekile. Fihla izinwele zakhe ngaphansi cap bese ubamba imizuzu amathathu, bese uxubha.
Kukhanye buso ekhaya: kadokotela 3
Ngimbonga ngaso sonke isikhathi ukuchitha ezinye ucwaningo ngezinwele zakhe. Ngokuvamile Ngidweba, kodwa isimo ungenza Perm, iphendukele umthamo. Ngaleso sikhathi, kakade nenkinga enkulu nge izinwele: abagcinanga elahlekile ucwebezela ngendlela ekhangayo yabo, kodwa futhi ziye zaba ziyaqothuka kakhulu. Futhi lokho ngenkathi ngiqala wazama imaskhi lemon, umphumela okwabe nje ekhexisayo.
Ilungiselela kanjalo kubalulekile ngawakhamela ijusi lemon isipuni, mix it ne iqanda elilodwa. IMisa ugovuze kahle, thina ukusabalalisa izinwele phezu obuphelele yabo yonke. Umelana imizuzu eyishumi futhi ugeze off ngamanzi afudumele.
Qaphela ukuthi imaskhi, hhayi kuphela lokhu, kodwa iyiphi enye, kuphela isicelo ukuhlanza izinwele, futhi ngemva uyisebenzisa, kakhulu, asikwazi yakhetha egeza. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba kuphela kuleli cala, imaskhi uzokwazi ukunikeza izakhi zabo.
Ukuzifihla izinwele ngoba kukhanye: zisebenzisa izitshalo
Uma ufuna izinwele zakho ukuba abe shiny futhi, khona-ke siyazi ukuthi kukhona ezinye izitshalo emangalisayo, okwaholela ukuba nemiphumela emihle. Okokuqala, kukushiya of birch. birch Oku eshiya ugaye (nquma fake ngommese), bese uzithatha wezipuni ezimbili, uthele ingilazi yamanzi kanye ake ume imizuzu okungenani eziyishumi nanhlanu. I kwaphumela umhluzi birch izinwele kufanele yakaza ngemva ukugeza katsatfu ngeliviki.
Burdock futhi akusize. Phela, lo elinye igama burdock, uma umuntu akazi. Thatha izimpande namaqabunga zalesi sitshalo, nquma, uthele amanzi (ngesilinganiso 2 wezipuni. L. Glass yamanzi), ake ukuma (anele imizuzu engamashumi amathathu).
Parsley, okuyinto lukhula abaningi bethu engadini, ungakwazi futhi ukubuya izinwele akhanye zemvelo. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ugcwalise parsley ngamanzi ngesilinganiso amagremu amahlanu zasemazweni isigamu ilitha lamanzi. Gqokani emlilweni ophansi bese uvumele pokipyatit imizuzu amabili. Ready ukusebenzisa conditioner njalo emva ukugeza.
Hhayi-ke, Ngiyathemba ukuthi uyayijabulela zokupheka kanye uqinisekile izosebenzisa kubo ekuphileni kwabo kwansuku zonke ukunikeza akhanye ukuze izinwele.
Imibala yezinwele zesikhashana. Izinhlobo zabo nezinhlobo
Indlela ukukopela izinwele iDemo ekhaya: Amathiphu ochwepheshe
Life after iphrojekthi Nelly Ermolaeva. Biography Nelly Ermolaeva kanye nempilo yakho
Vitamin D ngomntwana: izinkomba, umthamo. Amafomu vitamin D ukukhululwa
Chloroacetic acid: Ukulungiselela nezakhi ezithile zamakhemikhali
"Ksamiol": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa, abstract
Diana Starkova: Biography futhi ukuphila siqu supermodel
Citationality Famusov isici. Griboyedov "Maye kusukela Wit"
Kuyini omsakazo ephakamisa?
Izivakashi ngembazo. Izivakashi setha. Ukubuyekeza, Amanani